Brezila dia hanana Apple Pay amin'ny fomba ofisialy amin'ity taona ity | Avy amin'ny mac aho
Ary ny zava-nitranga dia roa volana lasa izay izahay dia niresaka tamin'ny hoe avy any Mac aho momba ny mety hidinan'ny Apple Pay amin'ny fomba ofisialy ao amin'ity firenena ity amin'ity taona ity ary farany dia i Tim Cook ny tenany, tompon'andraikitra amin'ny fanamafisana izany vaovao tsara izany nandritra ny ora marainan'ny omaly teto amintsika.
Tsy isalasalana fa izany dia tsiambaratelo misokatra teo amin'ny haino aman-jery sasany any Brezila, fa ankehitriny ary manararaotra ny valandresaka momba ny valim-pifidianana an'ny orinasa, ny CEO Apple dia nanamafy tany am-piandohana fa hanana ny Apple Pay i Brezila amin'ny faran'ity taona ity. Tsy nanondro daty marina izy, ka tsapanay fa amin'ny faran'ny taona toy ny nitranga teto amin'ny firenentsika io rehefa voamarina tamin'ny fomba ofisialy ny fahatongavany, saingy tsy fantatra izany.
Ny voalohany nahatsikaritra fa mety hisy io serivisy io any amin'ny firenena Mpanjifa Banco Itaú, izay horesahintsika amin'ity medium ity. Ny hita mivantana dia ny fepetra sy fepetra amin'ny serivisy an'ny Apple Pay, noho izany dia voamarina fa izy ireo no voalohany manana Apple Pay mihetsika.
Mazava be izahay fa ity fomba fandoavam-bola amin'ny Apple Pay ity dia azo antoka, haingana ary ambonin'izany rehetra tsotra ho an'ny mpampiasa ny vokatra Apple. Amin'ny tranga misy anay dia tsara vintana tokoa izahay fa ny ankamaroan'ny ATM, magazay ary orinasa hafa dia misy databata mifandraika ary midika izany fa ny fampiasana azy ireo dia isan'andro, farafaharatsiny isaky ny te handoa karatra izahay. Eto izahay dia manana lisitr'ireo entitra mifanentana amin'ny Apple Pay, fa tamin'ny voalohany dia natokana ho an'i Banco Santander ihany koa ary efa ela vao niparitaka tany amin'ny banky hafa toa an'i La Caixa miaraka amin'ny CaixaBank sy imaginBank na N26, etsy ankilany dia hahaliana raha toa ka tsy mijanona ity fanitarana miaraka amin'ny ambiny entin'ny banky ity fa zavatra iray izany tsy maintsy tohizana ny fifampidinihana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Manana Apple Pay amin'ny fomba ofisialy i Brezila amin'ity taona ity